Mpanamboatra fantsom-bokatra sy fametahana kodiarana, mpamatsy - China Factory Switch & Clip Cord Factory
Tavoahangy vita amin'ny tatoazy tsy misy vy
Anaran'ny vokatra: pedal vy vy (lehibe sy kely) Lehibe: haben'ny pedal: 70 * 105 * 25.5mm haben'ny fonosana: 120x80x72mm Kely: haben'ny pedal: 60 * 76 * 25.5mm haben'ny famonosana: 103x75x62mm Lehibe: lanjan'ny harato: 284g Lanja mavesatra: 311g Kely: lanja net: 261g lanjany 285g Halavan'ny tariby: teboka fivarotana 2m: 1. fitaovana vy tsy misy fangarony, lanja ampy, tsy harafesina, mahazaka ary mora diovina; 2. Misy pads fiarovana amin'ny fingotra amin'ny pedal ambony sy ambany, famolavolana tsy mihetsika, fahatsapana tongotra malefaka, afaka bette ...
Fanovana tongotra tongotra vaovao
Tsihy vita amin'ny kofehy manohitra slip miaraka amina groove eo an-tampony mba hipetrahana tsara kokoa. Ny plug-telefaona mifandraika amin'ny famatsiana tatoazy angovo. Famaritana: loko: mainty Fitaovana: Hodi-kazo akrilika: manodidina ny. 1.5m / 5ft Lisitry ny fonosana: 1 * Tattoo Foot Switch Pedal Packing & Delivery Mba hiantohana tsara kokoa ny fiarovana ny entanao, tolotra fonosana matihanina, sariaka, sahaza ary mahomby no homena. Fampahalalana momba ny fandefasana entana 1. Mandefa manerantany ve ianao? Eny, miasa izahay amin'ny fitondrana WJX eve ...
Round 360 diplaoma Tattoo Machine Foot switch Foot Pedal
Loko: mainty 1. dian-tongotra 360 degre, ampifandraisin'ny tariby silika malefaka, 1,75 metatra ny halavan'ny tariby; 2. Ny famolavolana tsy mihetsika eo amin'ny farany ambany dia manatsara ny coefficient ny friction amin'ny gorodona, ary tsy hisy olana intsony amin'ny fivezivezena amin'ny tongotra mandritra ny tombokavatsa; 3. Famindrana kintana dimy manondro, fihetsika mikraoba vaovao (tsindrio raha hanokatra, tsindrio hikatona), mety amin'ny avo lenta sy mateza, Mampiasà fitaovana avo lenta, fisehoana tsara tarehy; 4. Fitsapana mafy alohan'ny handaozany ny ozinina; 5. Ny tongotra sw ...
Pedal an'ny tatoazy mifehy ny tongotra tongotra matihanina
Ny tongotra tongotra tatoazy dia famadihana tena ilaina amin'ny fanaovana tatoazy. Izy io dia manana famolavolana switch mavesatra avo lenta, miaraka amin'ny tongotrao manosihosy azy, dia hahatonga ny milina tatoazy hatanjaka hatrany. Fitaovana firaka, mahatsapa tena 360 ° manodidina ny fitondra mandeha haingana, tsy misy joro maty. Endri-javatra: Fitaovana firaka, mahatsapa tena 360 ° manodidina ny fitondra mandeha haingana, tsy misy joro maty. Ataovy mahazo aina tsara ny tongotrao, mety mihetsika, mampihena ny havizanan'ny mpanao tatoazy. Tariby varahina madinidinika 65 miaraka amina herinaratra mahery ...
New Skull Premium Quality Tattoo Foot Switch
Function: Professional foot pedal ho an'ny famatsiana herinaratra anarana: Tattoo footpedal Package misy: 1pc Color: halefa tsy kisendrasendra Ny tombotsoantsika Manana traikefa mihoatra ny 10 taona ny vokatra aondrana any amin'ny tsena Eoropeanina USA. baiko. Serasera tena tsara, Serivisy tsara indrindra, azo antoka ny kalitao miaraka amin'ny vidin'ny varotra mivantana ambany! Tongasoa i OEM. Fandefasana: 1. fandefasana manerana izao tontolo izao. 2. Ny baiko namboarina ara-potoana taorian'ny fanamarinana ny fandoavam-bola. 3. Izahay o ...
Pedal tatoazy 360 degre
Anaran-javatra: pedal an'ny tongotra tatoazy Misy karazany 6 ny pedal amin'ny tongotra tsy voatery. Ny tongotra tongotra tatoazy dia mifanaraka amin'ny famatsiana herinaratra sy ny milina fanaovana tombokavatsa. Mora ny miasa sy mampiasa, maivana, mora entina. Ataovy mora kokoa sy mety kokoa ny fanaovana tatoazy. Fitaovana famatsiana tatoazy matihanina ho an'ny artista tatoazy. Endri-javatra: Bika sy endrika kanto. Mety amin'ny karazana famatsiana herinaratra milina tatoazy. Ny switch pedal an'ny tongotra dia ampiasaina hifehezana ny famindran'ny masinina. Ny tsipika fampifandraisana dia ampy hatry ny ela ...
Masinina vita amin'ny tatoazy avo lenta tongotra mifindra tongotra mifehy Controller Power Supply
Tsihy vita amin'ny kofehy manohitra slip miaraka amina groove eo an-tampony mba hipetrahana tsara kokoa. Ny phono-plug dia mifandraika amin'ny famatsiana tatoazy hery rehetra. Ny pedal tongotra dia ampiasaina hifehezana ny famindrana herinaratra an'ny masinina. Ity pedal ity dia kalitao tsara sy mahazo aina faran'izay tsara. Lisitry ny fonosana: 1 * Tongotra tongotra mifindra tongotra Tattoo ny serivisy anay 1. Tolotra fanonerana 2 ora. 2. Ny mailaka rehetra dia ho voavaly ao anatin'ny 24 ora. 3. Ny sarany ohatra dia haverina rehefa voamarina ny baiko. FAQ 1. Ahoana no fomba ahazoako santionany hijerena ny kalitaon'ny vokatra? ...
Tongotra tongotra vita amin'ny plastika vita amin'ny tatoazy plastika
Mora ampiasaina ity vokatra ity ary mety aminao tsara. Maninona raha mijery izao? Endri-javatra: Toeram-piarovan-tany tsy mitongilana ary miaro anao sy ny gorodonao. Mainty misy famolavolana toradroa tsotra, fitaovana tsara ho an'ny tatoazy. Maharitra sy mora ampiasaina, safidy tsara indrindra amin'ny salon hatsaran-tarehy. Mazava sy mamonjy elanelam-potoana, mety tsara aminao. Tonga lafatra amin'ny karazana milina tatoazy. Famaritana: karazana: Tattoo Foot Pedal Material: Plastika Item size: eo ho eo. 9 * 6 * 2cm / 3.5 * 2.4 * 0.8in (L * W * H) Lanjan'ny entana: Ap ...
Kintana fivezivezivezena misy kintana 360 misy tendrony Tattoo Pedal
Round 360 Star Tattoo Foot Switch Pedal Stainless Steel Pedal ho an'ny tatoazy Machine Tattoo Power Supply famaritana Ity Tattoo Foot Pedal / Foot switch ity dia tena matihanina tongotra tsara kalitao mandeha tsara! Izy io dia manana pedal switch-tongotra miaraka amin'ny base anti-skid, tsy marring. Mety amin'ny karazana famatsiana herinaratra an'ny milina Tattoo. Manasongadina pedal tongotra amin'ny kalitao avo lenta, lamaody! Pedal amin'ny kalitao matihanina, mifamadika amin'ny tongotra miaraka amina fotodrafitrasa tsy miady. Maharitra, matevina, mora entina sy ampiasaina ...
Tavoahangy vita amin'ny tombokavatsa vy
Izahay dia mijery lavanty momba ny 360Â ° Star Design Tattoo Foot Pedal misy tadiny 5'ft sy plug-n'ny telefaona 1/4 ″. Manasongadina ny base anti-marring anti-marring. Ny famolavolana mora idirana dia manome fifehezana milina faran'izay tsara. Manana fitaovana sy kojakoja fisafidy maro isafidianana isika. Fampahalalana amin'ny endri-javatra: Condition: Brand vaovao 360Â ° Star Design Tattoo Foot Pedal Halavany: 5'ft loko: Silver Standard 1/4 ″ vy-vy vy plug. Toeram-piadiana fanoherana tsy maresaka. Refy: 3 Â½ ”x 3 Â ...
Manenona Tady Clip Tady & Tady RCA
Ny tadin'ny tombokavatsa farany silika & tadin'ny RCA 6 metatra ny halavany: tokony ho 6 mm avo lenta 100% silipo malefaka, tariby varahina 22 AWG Ny fonosana fifampiresahana rehetra dia fonosina amin'ny fantsona plastika mba hisorohana ny fahavakisan'ny anarana: Clip Tattoo Cord, RCA Cord Fitaovana: Silicon / Copper Usage: Ho an'ny milina fanaovana pirinty loko: Black Yellow Green Blue Purple Red FAQ 1. Ahoana ny fonosana? - fonosana marika MOLONG Tattoo, fonosana tsy miandany, fonosana OEM (Quantity be) Misy 2. Ahoana ny kalitaony? - Qu ...
Tady herin'ny tatoazy mifandraika DC & RCA
Lanja milanja: 27g lanja mavesatra: 38g habe: 2m * 1.8mm fonosana: fonosana kitapo opp Loko: loko telo mainty - faribolana mena - manga Interface: RCA interface Advantage: 1. Andalana faran'izay tsara miaraka amin'ny fomba tsy miova, kalitao tsara ary kalitao mafy; 2. interface tsara varahina, avo lenta, mahatohitra fitafiana; 3. Ny habe manerantany, azonao atao ny mividy sy mampiasa amin'ny fahatokisana; 4. Ny interface silikôla dia matevina, manohitra ny fiatoana ary manohitra ny triatra; FAQ Q Ahoana ny amin'ny ora fandefasana? Ny fotoana fandefasana dia 3-5 andro ...